UkuThengiswa kweMveliso: iAnatomy yamava angabhalwa ebhokisini | Martech Zone
UkuThengiswa kweMveliso: iAnatomy yamava angabhalwa ebhokisini
NgeCawa, uDisemba 24, 2017 Douglas Karr
Abanye benu bangaqengqeleka amehlo apha kule nto, kodwa okokuqala ndabona ngokwenyani ukupakishwa kwemveliso kuxa umhlobo olungileyo wandithengela iAppleTV. Yayisisisixhobo sokuqala seApple endakha ndasifumana kwaye amava anokuthi andikhokelele kwimveliso ezininzi zeApple endinazo ngoku. Elinye lamava angummangaliso we-unboxing yayiliMacBook Pro yam yokuqala. Ibhokisi yayigqibelele ngokugqibeleleyo kwaye iMacBook ibekwe ngokugqibeleleyo njengoko wawutyibilika upakisha ukuze uyibone. Kwajongeka kwaye ndaziva ndikhethekile… kangangokuba ndijonge phambili ekufumaneni iMacBook Pro entsha qho emva kweminyaka embalwa (sendishiywe lixesha ngoku)
Kuphikise oku kwiLaptop endiyithengileyo kunyaka ophelileyo. Kwakungeyiyo iLaptop yeWindows engabizi kodwa ndothuka ngokumangalisayo xa bayikhupha. Yayipakishwe kwikhadibhodi emdaka ngombala kwaye i-Powerupply yayisongelwe engxoweni yatyhalwa kwibhokisi emhlophe, ebhityileyo, ephepheni. Ngelixa ilaptop yayintle, i-unboxing ayishiyanga nto. Kwakudanisa ngokunyanisekileyo. Okubi nangakumbi, kundenze ndazibuza ukuba ingaba le nkampani ingemva kwelaptop yayijonge nyani na okanye isindisa nje iirandi ezimbalwa ekupakisheni.
Abathengi namhlanje bahlukanisiwe namava okuthenga kwaye bahambela kude kulwaneliseko lwamva nje xa bekuthengwa. Kungenxa yoko le nto kugxilwe kwimimandla eseleyo yokuvezwa kwegama lakho kubathengi kufuneka kubekwe phambili. Ukunyanzela ukungabikho kwamanqindi akufuneki kuthathelwe ngqalelo xa kuthathelwa ingqalelo ifuthe lawo kulwaneliseko lwabathengi ngokubanzi. UJake Rheude, Inzaliseko ebomvu yeStag
Siqulunqe ukufakwa okumbalwa kubathengi bethu ukuba babandakanye neemveliso zabo ze-ecommerce kule minyaka idlulileyo. Inye yayilikhadi lombulelo elilula elinesaphulelo esinokukhokelela kugcino olungcono. Enye yayilikhadi lokwabelana noluntu elinazo zonke iiakhawunti zenkampani kuyo kunye ne-hashtag yokwabelana ngesithombe se-odolo kwi-intanethi. Nanini na xa umthengi esabelana ngeodolo yakhe, inkampani yayabelana ngayo ngeendaba zosasazo. Yayiyindlela elungileyo yokuqonda abathengi babo kwi-Intanethi kunye nokwabelana nabanye kwezentlalo ukutsala abathengi abatsha.
Yenye yeendawo ekugxilwe kuzo Inzaliseko ebomvu yeStag Ukwabelane njengeyona ndlela yokusebenza kwi-infographic yabo, I-Anatomy yamava afanelekileyo e-Unboxing. Iingcali zihlalutye oko kuvelisa ezona mpembelelo zininzi kubathengi, kubandakanya:
Ibhokisi - uyilo lwebhokisi yangaphandle, ukupakisha iteyiphu, kunye nebhokisi yangaphakathi.
Isixhobo sokugcwalisa kunye nokupakisha Iphepha elinophawu lwethishu, iphepha elirhabaxa, kunye nezinto zokupakisha ezikhutshiweyo.
Inkcazo-mveliso -Ukuqaqambisa imveliso ephambili kunye nokufihla izixhobo kunye namaxwebhu.
Ukuya ngasentla nangaphaya -Ukubonelela ngesilingo sasimahla, kubandakanya ileyibheli yokubuyisa, kunye nokukhuthaza ukwabelana ngokwasentlalweni.
Ukubaluleka kokufakwa -Yongeza inqaku elilelakho, kunye nezinto zokuthengisa ezithengisa ezinye iimveliso ezifanelekileyo kunye nokunyusa.
Iinkcukacha ze-infographic nganye yezi kwaye zibonelela ngengcebiso eyongezelelweyo kwimigibe eqhelekileyo, kubandakanya iibhokisi ezinobungakanani obungaphezulu, amandongomane amagwebu, ukupakisha okunzima kunye neteyipu ebuthathaka.
tags: kuzalisekaamava emvelisoukuthengisa imvelisoInzaliseko ebomvu yeStagunboxing
'Lixesha leXesha… eliya kwiBenchmark ngokuchasene neeNdlela zonyaka